Atao inona ny tranonkala Community? · Global Voices teny Malagasy
Atao inona ny tranonkala Community?
Voadika ny 18 Jolay 2019 6:27 GMT
Vakio amin'ny teny українська, English
Ny bilaogin'ny vondrom-piarahamonina dia sehatra ho an'ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba hizarana tantara momba ny fiainantsika, ny tranontsika sy ny fonenantsika ary ny fodiantsika, ny diantsika sy ny fihaonantsika, mba handinihana ny asantsika sy hizarana hevitra momba ny sehatra misy antsika. Mizara sary, fandinihana, tahotra na fanantenana, fiovana eo amin'ny fiainana. Mitantara mpiara-miasa na namana, na koa tetikasa na tantara mba hampivelatra ny fiainantsika. Manolotra hevitra ho an'ny tetikasa iombonana, manasa ny hafa hiresaka na hifanakalo hevitra sy lohahevitra, momba ny asa sy izao tontolo izao, na manomboka resaka fotsiny.
Raha toerana ho an'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny GV hifaneraserana, hilalaovana sy hanehoana hevitra ity tranonkala ity, dia hitan'ny daholobe izany, mba hahalalan'izao tontolo izao ny olona ao ambadiky ny Global Voices, ary koa hanatevin-daharana antsika amin'ny adihevitra sy fifanakalozan-kevitra ao amin'ny takelaka fanehoan-kevitra .
Te-hanoratra lahatsoratra ato amin'ny tranokalan'ny Community?
Raha efa manana kaonty ao amin'ity tranonkala ity ianao, midira fotsiny ao ary mamorona drafitra! Raha tsy izany, ampiasao ny endrika Hamoaka raha handefa ny lahatsoratrao voalohany ary hamorona kaonty ho anao izahay!
Tsy maneho ny fomba fijerin'ny Global Voices ireo lahatsoratra ao amin'ity tranonkala Community ity
Satria afaka mamoaka eto tsy misy famerena famoahana ireo mpandray anjara ato amin'ny GV, dia aza eritreretina ho misolo-tena ny Global Voices manontolo ny hevi-dahatsoratra eto. Tsy mihatra eto ireo fenitra fitsipi-pamoahana henjana mihatra amin'ny tranonkala fototra an'ny Global Voices. Avy amin'ireo mpanoratra manokana ny fomba fijery ao amin'ny lahatsoratra.
Momba ny fango (logo)
Ny sary famantarana ny Global Voices Community avy amin'i Jer Clarke dia mifototra “Tambajotra”, sary kely namboarin'i Bybzee avy amin'ny Tetikasa Noun.